၂၀၂၁ ခုနှစ်သည်အိုင်တီနှင့်နည်းပညာအလျင်အမြန်တိုးတက်လာသည်နဲ့အမျှလူသားများအတွက်လဲအလွန်စိတ်၀င်စားဖွယ်ကောင်းသောအရာများထွက်ပေါ်လာပေးအုံးမည်။ ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးလဲ နိုင်ငံကိုနည်းပညာနဲ့ပုံဖော်ရန်အပြိုင်အဆိုင်ကြိုးစားနေကြပေသည်။ ဥရောပသည်“ စက်မှုလုပ်ငန်း ၄.၀”၊စင်ကာပူနိုင်ငံသည်“ စမတ်နိုင်ငံ” ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်လဲ “ Society 5.0” စီမံကိန်းကိုပုံဖော်နေပြီဖြစ်သည်။
ဤ Blog မှာတော့၂၀၂၁ခုနှစ်အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အိုင်တီနှင့်နည်းပညာကဏကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
၁. IOT (Internet of things)
မီးခွက်များ၊ ကော်ဖီစက်များ၊ နာရီများ၊ မျက်မှန်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်လူနေမှုအဆင့်အတန်းကိုပြောင်းလဲစေသည့်အလွယ်ကူဆုံးဥပမာများဖြစ်သည်။ဂျပန်နိုင်ငံမှ IoT သည်“ Society 5.0” စီမံကိန်း၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီးကိုယ်ပိုင်ကားများ၊ စမတ်စက်ရုံများနှင့်
အိမ်များဖြင့်ကိုယ်စားပြုသည်။ထို့အပြင်လျင်မြန်စွာအိုမင်းပြီးကျဆင်းလာသောလူဦးရေကိုတွေ့ကြုံခံစားနေရသောဂျပန်သည် IoT ၏စွမ်းရည်ကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနယ်ပယ်တွင်ထောက်ပံ့ရန်အတွက်လဲကြိုးပမ်းနေသည်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုသည်နည်းပညာနှင့်ပေါင်းစည်းနေပြီ ဖြစ်၍
၂. 5G and Mobility
5G နည်းပညာသည်လဲဂျပန်နိုင်ငံတွင် ၂၀၂၁ အတွက်နောက်ထပ်ရေးပန်းစားသော်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်မှာလဲတရုတ်ကုမ္ပဏီများသည် 5G နည်းပညာနှင့်မူပိုင်ခွင့်များ၌ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သော်လည်းဂျပန်အစိုးရသည်အလွန်မြန်ဆန်သောဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက်
ထောက်ပံ့ငွေဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီကတိပြုခဲ့သည်။ ဂျပန်နိုင်ငံ၏အရေးအပါဆုံးဆက်သွယ်ရေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် NTT docomo ၏အဆိုအရကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ၂၀၂၁ ပြည့်နှစ်အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲမတိုင်မီခရိုင် ၄၅ ခုလုံးသို့၎င်း၏ 5G စီးပွားဖြစ်ဝန်ဆောင်မှုကိုတိုးချဲ့ရန်စီစဉ်နိုင်ခဲ့သည်။
5G နည်းပညာသည်ဆက်သွယ်ရေးအပြင် ကမ္ဘာဗီဒီယိုဂိမ်းလောကကိုတိုးတက်လာစေသည်။ ၂၀၁၉ တိုကျိုဂိမ်းပြပွဲတွင်လဲရှင်းပြထားပြီးဖြစ်သည်။
၃. AI (Artificial intelligence)
AI သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် Society 5.0 စီမံကိန်း၏အဓိကအကြောင်းအရင်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ EU - ဂျပန်စက်မှုလက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဌာန၏အစီရင်ခံစာအရစားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်လုပ်ငန်း၌တက်ကြွနေသောဂျပန်ကုမ္ပဏီများသည်မူပိုင်ခွင့်အများဆုံးလျှောက်ထားသူများအနက်ခိုင်မာသောနေရာတွင်ရှိနေသည်။ လက်ရှိတွင်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ မူပိုင်ခွင့်နယ်ပယ်တွင်ပုံရိပ်ပြုပြင်ခြင်း၊ သတင်အချက်အလက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာရောဂါရှာဖွေခြင်းဆိုင်ရာနည်းပညာများလွှမ်းမိုးထားသည်။ သို့သော်အထူးခြားဆုံးတိုးတက်မှုကိုစက်ရုပ်နယ်ပယ်တွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။
ထို့အပြင် IoT အနေဖြင့် AI နှင့်သက်ဆိုင်သည့်သက်ကြီးရွယ်အိုလူ့အဖွဲ့အစည်း၊ အလုပ်သမားပြတ်လပ်မှုစသည့်လူမှုရေးissuesပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်နေသည်။
HR နယ်ပယ်တွင် AI နည်းပညာကိုလုပ်ငန်းခွင်၌အသုံးပြုခြင်းကိုအကောင်းမြင်သူများသည်။ ဥပမာအားဖြင့် Oracle and Future (AI at Work) ၏လေ့လာမှုအရဂျပန်လူမျိုး ၂၉% သည်အလုပ်ခွင်တွင် AI ပုံစံတစ်မျိုးမျိုးအသုံးပြုသည်ဟုဝန်ခံခဲ့သည်။ဂျပန်နိုင်ငံတွင်နည်းပညာနဲ့ပတ်သတ်တဲ့အခွင့်အလမ်းများမှာအလွန်မြင့်မားပြီး AI နည်းပညာနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပြပွဲများလည်း ၂၀၂၁ တွင်ပိုများလာဟုယုံကြည်ရသည်။
၄. Robotics (စက်ရုပ်)
ဂျပန်တွင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်စ၍စက်ရုပ်မဟာဗျူဟာအသစ်နှင့်အတူစက်ရုပ်တော်လှန်ရေးသည်လဲတရားဝင်စတင်နေပြီဖြစ်သည်။
စက်ရုပ်ဟုဆိုလိုက်လျင်လူအများစုသည်လူကဲ့သို့သောရုပ်ပုံများရှိသည်ဟုထင်ကြသည်။ သို့သော်ဂျပန်နိုင်ငံတွင်မှာတော့စက်ရုပ်သည်အာရုံခံကိရိယာများ၊ အသိဥာဏ်ရှိသောထိန်းချုပ်မှုစနစ်နှင့်မောင်းနှင်မှုစနစ်တို့ပါ၀င်သည့်အသိဉာဏ်ရှိသောစက်စနစ်ဟုဆိုလိုနိုင်သည်။
၅. Digital Marketing
ဂျပန်နိုင်ငံသည် Digital Marketing အပိုင်းမှာတော့အချို့သောအခြားနိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနည်းငယ်နှောင့်နှေးနေပင်မဲ့ နောက်ဆုံးတွင်ဂျပန်၌စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစနစ်ထွက်ပေါ်လာပေသည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်နှင့်ဒီဂျစ်တယ်ကြော်ငြာများသည်ဤပြောင်းလဲမှု၏ဥပမာနှစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးရှိဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုအာရုံစိုက်သည့်ပြပွဲများ၊ ဟောပြောပွဲများနှင့်ကွန်ဖရင့်များသည် ပို၍ ပင်လူကြိုက်များလာသည်။